Sergio Ramos Child Story Story na ihe omuma
Home EUROPEAN FOOTBALL STORIES Ndị na-egwu egwuregwu bọọlụ Spanish Sergio Ramos Child Story Story na ihe omuma
LB na-egosi Full Story of a Football Genius kasị mara aha na aha njirimara; "Cuqui". Anyị Sergio Ramos Child Akụkọ na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo ụbọchị. Ihe omumu ya bu ihe omuma ya tupu ama aha ya, ndu ezinulo ya na otutu ndi mmadu.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ikike ya ma ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle Sergio Ramos Biography nke na-adọrọ mmasị. Ugbu a na-enweghị n'ihu adieu, hapụ Amalite.
Sergio Ramos Child Story Story na -Ndụ mbido
A mụrụ Sergio Ramos García na 30th nke March 1986 na Camas, Seville, Spain site na nne na nna; Paqui Ramos (nne) na Jose María Ramos (nna).
A zụlitere ya na nwanne ya abụọ bụ Rene na Miriam.Ramos na-arị elu football mgbe ọ dị afọ 14 dịka onye agbachitere.
Site n'oge nwata ya, Ramos nwere àgwà a mara mma ma mara mma.
Dika nwatakiri nke tolitere na obodo ohia nke Seville, Sergio malitere inwe obi uto ma ghara imuta ihe banyere football. O nwere ike ile egwu ehi ehihie.
Sergio Ramos hụrụ Bull ọgụ
N'ihi na a na-ewere ya dị ka egwuregwu dị ize ndụ, nne na nna ya mere ka ọ ghara ịhọrọ ọrụ. Ọ bụ nwanne ya nwoke nke okenye nke mere ihe kachasị mkpa dị ka ọ bụ maka Sergio Ramos anyị maara taa.
N'okwu ya, "Mgbe m bụ nwata, enwere m ọrụ nrọ. Achọrọ m ka ọ bụrụ onye na-eme ihe ike, ma nne m na-atụ ụjọ na m ga-abụ onye na-achụ anụ ọkụ. Mgbe nwanne m nwoke nke tọrọ m bụ Rene na-enye ndụmọdụ, achọpụtara m maka ịgba chaa chaa nke na-abaghị uru. "
Sergio Ramos Child Story Story na -Ọrụ na Nchịkọta
Nwanne ya nwoke ohuru, Rene (nke mere ugbu a dika onye na-acho ya) gbara Sergio ume ka o gbaa aka n'egwuregwu. Ndị mụrụ ya haziri onye na-azụ onwe ya maka onye nyere ya aka ịchọpụta talent dị na egwuregwu ahụ.
Sergio Ramos ọzụzụ onwe onye
Mgbe ọ chọpụtara na otu talent na football so ọgbakọ mbụ ya, FC Camas. O nwere nnukwu ọganihu mgbe ọ na-eto eto ntorobịa na-emeri n'ọtụtụ egwuregwu, na-agakwa ọtụtụ ndị gbara ajụjụ ọnụ.
Na FC Camas, ọ pụtaziri na obere Sergio nwere talent football ukwu n'ime ya. Nke a mere Sevilla iji jide ya.
Sergio Ramos kwalitere ọrụ ya site na mpaghara Sevilla FC. Nke a kwadoro nke a ma na FIFA Ballon d'Or Gala. N'ebe ahụ, o gosipụtara nnukwu ikike na 2003 e mesịrị kpọọ ya na ndị ọrụ mbụ. Sergio nọgidere na-alụ ọgụ, na-echekwa onwe ya na ihe ọma ndị ọ rụzuru, ebe na-amalite usoro dị ka onye nchebe ziri ezi.
Ọtụtụ okpukpu Europe na-esochi ọganihu ya na nlezianya anya ya ụbọchị Sevilla. N'ihi ezigbo ihe ndị ọ rụzuru, Sergio nwetara ọtụtụ onyinye. Ọ bụ Spanish football football nnukwu Real Madrid na akpatre ama afiak enye. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, ya ugbu a akụkọ ihe mere eme.
Sergio Ramos Child Story Story na -Ndụ Ezinụlọ
NME: Jose María Ramos (nna Sergio) na-arụ ọrụ dị mkpa na nhazi Sergio. O nyeere aka na mkparịta ụka siri ike na Real Madrid nke meworo ka mmeziwanye nke nkwekọrịta madridista ahụ kwadoro. Ọ bụ nwoke na-elekọta 27 nde Euro nyefe Real Madrid na 2005. Ọ bụ ego a na-enyefe maka nwa ya nwoke dị afọ iri na ụma.
Sergio Ramos nna, Jose María Ramos hụrụ nwa ya site na Real Madrid
Jose Ramos na-anọgide na-enwe mmekọrịta chiri anya nke nwa ya site n'oge ọ bụ nwata.
Sergio Ramos agaghị enwe nkwenye site na ezinụlọ ya ma ọ bụrụ na ọ kpebie ịhapụ Real Madrid maka Old Trafford n'oge ọ bụla ọ na-arụ ọrụ - n'ihi na nna ya bụ onye na-akwado Manchester United. Tupu Nzukọ Njikọ Ndị Njikọ dị n'etiti akụkụ abụọ na 2013, Ramos kpughere ịhụnanya nna ya maka football football.
Ọ gwara Sunday Times: 'Papa m na-ekiri ọtụtụ bọlbụ na ọ ga-agwa m mgbe m bụ nwata: Ya mere na otú a na-akpọ taa na United. Nwa, ị ga-ele Eric Cantona na David Beckham".
Nne:Ha na - ekwu na ndị nne na - adị mma mgbe niile, ya mere, ndị agbụrụ Manchester United na - ezigara ozi ọma mgbe Sergio Ramos 'mum kwuru na nwa ya nwoke ga - anọgide na Real Madrid.
Nne Sergio, Paqui Ramos bụ onye na-agba ọsọ Real Madrid. Ya, n'akụkụ Sergio n'akụkụ nwunye ya bụ ngwá ọrụ na Sergio na-aga n'ihu na Real Madrid ọbụna mgbe mgbasa ozi na-anọgide na-ekpughe obi iru ala Ramos na Bernabeu mgbe onyeisi oche Florentino Perez na-emezughị nkwa ya iji kwụọ ụgwọ ya na 2015 ọhụrụ.
Enwere ezigbo mmekọrịta n'etiti Sergio na Paqui.
Sergio (nwa) na Pacqi's (nne) n'anya
Nwanna: Rene Ramos bụ nwanne okenye Sergio. Ọ bụ onye ọrụ ya ugbu a na-elekọta ọrụ ya. N'ụbọchị ndị a, ọ na-abanye n'ime ọrụ Sergio karịa Jose, papa ya bụ onye na-arụ ọrụ dị ukwuu.
Sergio Ramos nwanne- Rene Ramos
Dị ka e kwuru na mbụ, Rene bụ ụbụrụ n'azụ azụ Sergio na-etinye aka n'egwuregwu football.
Sister: Miriam Ramos bụ nwata na nwanne nwanyị Sergio Ramos. O nyere aka na agbamakwụkwọ nwanne nwanne ya na Pilar Rubio. Miriam mere ka odi nwanyi.
Sergio Ramos nwanne. Mariam dị ka ndị lụrụ nwanyị, nwa agbọghọ
Sergio Ramos Child Story Story na -Ndụ mmekọrịta
Ramos soro onye nta akụkọ na Pilar Rubio nweta mmekọrịta na September 2012, nke a kwadoro nke a site na FIFA Ballon d'Or Gala. Pilar Rubio bụ onye a ma ama Television, onye na-eme egwuregwu na ihe nlereanya. A maara ya maka ekpuchi ihe omume maka netwọk telivishọn La Sexta. Ọ na-emegharịkwa na magazin ndị ikom dị iche iche wee pụta na fim Isi & Disi, alto voltaje, Carlitos y el camp de los suenos, Cuestion de quimica na ọtụtụ ndị ọzọ. Na 2008 na 2009, a họọrọ ya dị ka ụmụ nwanyị kachasị nwee mmekọahụ na ụwa site na mbipụta Spanish nke magazin FHM.
Sergio Ramos na Pilar Rubio lụrụ na 2012 mgbe ha nwesịrị mmekọrịta dị mkpirikpi.
Foto Foto Sergio Ramos
Ha nwere ụmụ nwoke abụọ: Sergio (a mụrụ May 6, 2014) na Marco (a mụrụ November 14, 2015).
E kwuru oge ezumike maka ememe trophies bụ nnukwu ọṅụ nke Ramos na ezinụlọ ya.
Tupu ya na Pilar Rubio na-edozi, Sergio Ramos anọwo na mmekọrịta ndị ọzọ na actress.They gụnyere; Elisabeth Reyes (2006-2007), Carolina Martinez (2006), Nereida Gllardo (2007), Amaia Salamanca (2009) na Lara Alvarez (2010- 2012)
Akụkọ Sergio Ramos nke mmekọrịta gbasara akụkọ-akụkọ na-adịghị mma
Sergio Ramos n'oge gara aga mmekọrịta ndụ yiri nke Karim Benzema na Gonzalo Higuain bụ ndị na-ede ụmụ nwanyị tupu oge eruo tupu ha akwụsị. Ọ dị nnọọ iche na nke Harry Kane, David Silva na Pedro Rodriguez.
Sergio Ramos Child Story Story na -Ịhụnanya maka Guitar
Na N'ajụjụ ọnụ FourFourTwo, o kwetara na ọ bụ ịhụnanya na ezinụlọ - ma e jiri ya tụnyere ụmụnne ya na ezinụlọ ya.
Mgbe a jụrụ ya banyere ya, ọ sịrị, "Echere m onwe m na ọ bụ ihe kachasị amasị m n'ezinụlọ. Ọ na-esiri m ike ikwupụta ya n'èzí; M na-eji Guitar mee ihe "
Otú Sergio Ramos si egosipụta ịhụnanya
Sergio Ramos Child Story Story na -Ịlụ ọgụ
Ramos bụ onye na-akwado bullfighting, nke a na-ewu ewu n'obodo ya, ọ bụkwa enyi nke matador Alejandro Talavante. Ọ na - eme mmeri maka ụlọ osisi na mba site na igwu egwu ya.
Sergio Ramos ka na-eche bullfighting
Ramos bụkwa ezigbo ịnyịnya aficionado. O nwere ugbo ubi na nwa ya Andalusia nke mere ka o doo anya na a na-azụlite ịnyịnya Andalusian.
Sergio Ramos Child Story Story na -Onye Katọlik
Ramos bụ Catholic, ma nwee egbu egbu nke Mary nke na-ekpuchi ọkara nke ogwe aka ekpe ya.
Sergio Ramos okwukwe na egbu egbu
Sergio Ramos Child Story Story na -Eziokwu Ụdị
A maara Sergio nke ọma maka ọtụtụ ụdị nkà ya. Ọ nwere ọnụ ọgụgụ atụ nke inks na ahụ ya.
Sergio Ramos Isi Ụdị Ọnụ
Ọ na-ejikọta ihe dị iche iche na-akpata egbugbu ọ bụla. Ọnụ ọgụgụ ndị a dị nso n'obi ya. Ramos na-ejide uwe ojii no.32 na no.35 n'oge Sevilla, tupu ya abanye na Real Madrid ma na-eme ka ọ bụrụ okenye mbụ nke Spain bụ 19. Ihe ndị a bụ ihe ọnụọgụgụ / ọnụọgụ / ọnụọgụ / aka ya.
Eziokwu Ụdị Aka Aka Sergio Ramos
Sergio Ramos Child Story Story na -Nhọrọ nke Ụgbọ
Sergio Ramos na onye ọrụ ụgbọala Audi nke Germany na-enye ụgbọala ya ụgbọala.
Sergio Ramos nhọrọ nke ụgbọ ala
Sergio Ramos Child Story Story na -Ike na Ike
Ramos bụ onye ike na-ahụ ike nke kachasị elu, n'ihi na ọ na-ebuli elu ma na-eme ihe ziri ezi, na-eme ka ọ bụrụ ihe mgbaru ọsọ na-eyi egwu.
Sergio Ramos; Nwoke nwere ike
Ramos bụkwa onye ruru eru, onye na-eme ihe ike. A na-enye ya onyinye, ezi ike ike, yana ezigbo nkesa na ikike ịgafe.
Dị ka akwụkwọ akụkọ egwuregwu Spanish Eke, FIFA ihe ndekọ ederede gosiri na na 2015, Ramos nọ na-agba ọsọ nke 30.6 kilomita kwa awa, na-eme ya otu n'ime ndị na-agba ọsọ ọsọ ọsọ n'ụwa n'oge ahụ.
Ike na-adịghị ike ya bụ ịdọ aka ná ntị ya.
Akụkụ Dị Ike nke Sergio Ramos
E zigara ya karịa oge 22 ebe ọrụ ya malitere na Real Madrid. Nke a bụ ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke kaadị red na akụkọ ntolite nke ụlọ. Ọzọkwa, ya ndekọ La Liga na-achọghị maka Real Madrid. Sergio Ramos nwere kaadị uhie kachasị na La Liga akụkọ ihe mere eme. Ịhụnanya ya maka kaadị uhie adịghị agwụ agwụ.
Dani Ceballos Childhood Akụkọ gbakwunyere Ezigbo Ihe Ndị E Dere Ndụ
Kruse Mee 27, 2018 Na 4: 27 pm
Ọ bụrụ na Mr. Ramos maara ihe nsụhọ bụ ... ..
O kwesiri inwe obi ojoo banyere onwe ya taa.
O doro anya na onye a nwere akụkọ ọzọ dịka onye na-egwu egwu,
Agaghị m enwe obi ụtọ ma ọ bụrụ na akpụkpọ ụkwụ Zidane ...... nke yiri ka ọ bụ Ramos nwere ozi iji mee ka ọ bụrụ onye na-egwu egwu na Zidane kwesịrị icheta ihe ọ na-achọghị onwe ya dị ka onye na-egwu egwu, ọ dọrọ aka ná ntị site na Ramos ime ụnyaahụ.
Ụfọdụ ndị ji nwayọọ nwayọọ na-eme ihe jọrọ njọ; Ramos bụ otu n'ime ha na ọ ga-anakọtara kaadị 38 ya dị ka ndị na-akwado egwuregwu ọjọọ.
Ander Herrera Child Story Plus Akwụsịghị Echiche Eziokwu